Voalaza fa miombon-kevitra amin’izy ireo ny FISEMARE; Fampidiran-kizo ny mpiasa io. Vola tsy haverina, ary vola naloa tamin’ny alalan’ny karama no takiana, hoy i Barson Rakotomanga isan’ireo mpitarika sendikaly. Didy jadona, ary tsy nohenoina ny soso-kevitry ny solontenan’ny mpiasa izay nivoaka tamin’ny fivorian’ny Filankevi-pitantanana, hoy hatrany ireo sendikalista. Tokony naverina niadian-kevitra mba ho ny mpikambana rehetra tao anatin’ny Filankevi-pitantanana vao nalefa tany amin’ny Minisitry ny asa sy ny lalàna sosialy, ny minisitry ny vola, ny governemanta,… hoy hatrany i Barson Rakotomanga. Matoa tsy natao io dia didy jadona, famonoana ny mpiasa. Aza atao ankilabao ny mpiasan’ny tsy miankina, hoy izy ireo. Nampitaina any amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatry miady amin’ny tsy fanajana ny zon’olombelona. Tsy mikitikitika ny vola fisotroan-dronono mihitsy io, fa vola tombony, raha ny fanazavana. Mbola mihenjan-droa aloha ny tady hatreto eo amin’ny andaniny sy ny ankilany. Vao tsy ela no nihazo ny CNaPS ireo mpandeha mpitarika sendika, saingy mpitandro filaminana no niandry azy ireo, ka asa izay ho fisehony anio.